ရွာသူ၊ရွာသားများ နှင့် Internet အသုံးပြုသူများအားလုံး သတိပြုမိစေရန်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွာသူ၊ရွာသားများ နှင့် Internet အသုံးပြုသူများအားလုံး သတိပြုမိစေရန်။
ရွာသူ၊ရွာသားများ နှင့် Internet အသုံးပြုသူများအားလုံး သတိပြုမိစေရန်။
Posted by mG on May 9, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
ယခု ကျွန်ုပ် mG တင်ပြလိုက်သောခေါင်းစဉ်နှင့်အညီ။ယခုကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှ သိရသော Hacking ဆိုဒ်တစ်ခုကိုတင်ပြပါရစေ။
လည်းကောင်း Hacking ဆိုဒ်သည် Gmail ဒီဇိုင်းနှင့် ချွတ်စွတ်ပုံတူပြုလုပ်ထားပြီး ကမ္ဘာအနှံ့မှအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ အများစုမှာ Gmail ကိုအဓိကထား အသုံးပြုကျသောကြောင့် လည်းကောင်းနှင့်ပုံတူပြုလုပ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
လည်းကောင်း Hacking ဆိုဒ်ထဲသို့ လူကြီးမင်းတို့ Gmail ဖွင့်ကြည့်သလိုပဲ… Username & Passwords ရိုက်ထည့်မိပါက လည်းကောင်းဆိုဒ်ထောင်ထားသူများသည် လူကြီးမင်းတို့၏ အကောင့်နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကို သိရှိသွားပါမည်။ထိုကဲ့သို့သိရှိသွားပြီဆိုလျှင် အကောင့်ရဲ့ လျှိူ့ဝှက်နံပါတ်ကို လည်းကောင်းဆိုဒ်မှပြောင်းလည်းလိုက်ပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများအားလုံးကို ပြောင်းလည်းပြီး လူကြီးမင်းရဲ့အကောင့်ကို အစဖောက်ခိုးယူသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသော်ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့သိရှိစေရန်နှင့် Gmail ဆိုပါကချက်ချင်းမဝင်ပဲ…အရာရာတိုင်း ဆိုဒ်တိုင်းရဲ့အမှတ်အသားများကို သေချာစွာမှတ်ထားပြီး
ကိုယ်ဝင်နေကျဆိုဒ်အမှန်ဆိုမှ ဝင်ရောက်စေချင်ပါကြောင်း သတိပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
လည်းကောင်းဆိုဒ်လိုမျိုး အကောင့်များပျောက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါက ကျွန်ုပ် mG နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သလောက်ကူညီပေးပါမည်။
( မှတ်ချက် ။ ။ လူကြီးမင်းတို့ Gmail Account ပြုလုပ်စဉ်က ထည့်သွင်းခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်မိရပါမည်။အခြားသောအရာများကို
မှတ်မိသလောက်ပြောပြနိုင်ပါက အစဉ်ပြေသည်။ဘာမှမမှတ်မိရင်တော့..ကျွန်တော့အတွက် ခက်ခဲပါသည်။သို့သော် ကြိုးစားကြည့်ပေးပါမည်။ )
Post တင်ရင်း Website ကိုရေးပြဖို့ ကျန်ခဲ့တာကိုအနူးအညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ…အဲ့ဆိုဒ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့……
( www.orkut.com )
Blumail.com ကိုပြောတာလား … ???
ညီမကအခုမှ မန်းဂေဇက်ထဲကို အကောက်ဖောက်ထာပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါအုန်း။ ခုမှနက်စသုံးတာဆိုတော့ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်
ဘယ်အကောင့်ပျောက်တာလဲ။ ဂျီမေးလ်အကောင့်လား ဒါဆိုရင် အကောင့်လုပ်ခဲ့စဉ်က ဒုတိယမေးလ်ထည့်သွင်းရပါတယ်။ မှတ်မိရင် ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေဆိုထားတာ ပြန်လည်ဖြည့်လိုက်ရင်လည်း ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကတော့ မရတော့မှ လုပ်ကြည့်ပေါ့။ မရတော့ဘူးဆိုရင် နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကို ထပ်မံပြောပြပါမယ်။
ဒီနယ်ဘက်ကလူတွေ ခမျာသနားစရာပါ ခုမှအင်တာနက်မြင်ဖူးကြတော့ဘာမှန်းမသိစမ်းတဝါးနဲ ့ပါ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်များကြုံရင်သမီးတို ့ကိုကူညီပေးစေလိုပါတယ်။
@mayhtet >> အကောင့်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့…ဘယ်လိုအကောင့်ပျောက်တာလည်းဆိုတာကို ပြောပြမှအစဉ်ပြေပါ့မယ်ခင်ဗျ။အကောင့်တွေက ဆိုဒ်ပေါင်းစုံမှာ..အကောင့်ပေါင်းစုံရှိနေပါသောကြောင့်။
Gmail Account / Yahoo Account စသော..ဆိုဒ်ပေါင်းစုံရဲ့အကောင့်များရှိနေပါသောကြောင့် mayhtet ပြုလုပ်ထားသော အကောင့်ရဲ့ဆိုဒ်နာမည်ကိုပါပြောပြစေချင်ပါတယ်။
@manawphyulay >> ပြောတာလည်း..ဟုတ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း တိကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကို manawphyulay လည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် manawphyulay။
@မမလေး >> Blumail.com ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။photwenty ပြောသလိုပါပဲ။ကျွန်တော်လည်း အသုံးပြုဖူးပါတယ် (မမလေး) ပြောတဲ့ဆိုဒ်ကို . . . ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဆိုဒ်ကို အောက်မှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်နော်။
Post Comment ပေးပြီး သေချာ ဆွေးနွေးပေးကျတော့..သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်း..အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ IT နဲ့ပတ်သက်သော ပြသနာမှန်သမျှကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီမှုပေးပါ့မယ်။
mG ခင်ဗျား။ ကျွန်တော့ Gmail အကောင့်တစ်ခု ဝင်လို့မရဘူး။ ကြာတော့ကြာပြီ။ user name တော့မှတ်မိတယ်။ second mail တော့မပေးခဲ့ဘူး။ မေးခွန်းဖြေခဲ့တာလဲ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒါပြန်ရနိုင်မလားလို့ သိချင်ပါတယ်။ ရနိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် user name ကိုပို့ပေးရမလား ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ကိုနဂါးကြီးနဲ့တူတူပဲ နာမည်ပဲမှတ်မိတယ် .. ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ